मिडियामा समाचार आएपछि बैठकमै ‘हल्लीखल्ली’
फरकधार / २१ जेठ, २०७८
नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले अन्ततः नयाँ पार्टी खोल्न तयार हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
बिहीबारदेखि जारी भर्चुअल बैठकको दोस्रो दिन आज (शुक्रबार) पनि दिनभर पार्टी खोल्ने कि केपी शर्मा ओलीसँग मिल्ने विषयमा नेताहरुबीच विवाद चल्यो। बिहीबार ७ घण्टासम्म चलेको छलफलमा सदस्यहरुले ओली नसच्चिएको भन्दै नयाँ विकल्प खोज्न नहुने तर्क ४४ जना सदस्यहरुले राखेका थिए।
बिहीबारै विजय पौडेल, राजेन्द्र राई, जगन्नाथ खतिवडा र प्रकाश ज्वालाले नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई लिखित रुपमै चिठी पठाएर ओलीको टाङमुनि छिर्न आफूहरु तयार नरहेको बताएका थिए।
बिहीबार बैठकको सुरुमै सम्बोधन गरेर ‘पहिला तपाईँहरुका कुरा सुन्छु’ भनेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आजको पनि छलफलमा सम्बोधन गरेर बिट मारे।
बैठकपछि फरकधारसँग कुरा गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले दुईथरी मत आएपछि विवाद भएको बताए। ‘मोटो कुरा गर्दा दुईखाले कुरा आयो। एउटा भनेको एकताको प्रयास अझै गर्नुपर्छ। सकेसम्म मिल्नै पर्छ भन्ने लाइन,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अर्को चाहिँ एकताको रटान लगाएर पार लाग्दैन। छिट्टै नयाँ बाटोको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने आयो।’
सकेसम्म एकता, नभए नयाँ बाटो
पार्टी दुई धारमा जाने निश्चित जस्तै छ। उता एमाले नेपाल समूहमा दुईवटा समूह प्रष्टै देखिएका छन्। एउटा, सकेसम्म एकता हुनुपर्छ भन्ने र अर्को तत्काल नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने। यी दुई धारलाई राजनीतिक रुपमा एमाले वृत्तमा चर्चा हुने दुई शब्द छन्, सफ्टलाइनर र हार्डलाइनर।
एकताको जोड दिँदै ओली पक्षसँग निरन्तर संवादमा रहेका नेताहरु सफ्टलाइनरका पर्छन्। विवाद साम्य गर्न बनेको कार्यदलका सदस्यमध्ये गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे सकेसम्म एकता गर्नैपर्नेमा लागेका थिए। याक एण्ड यति होटल, बालुवाटार हुँदै सिंहदरबारसम्म भएका प्रयासबारे ४ नेताले बैठकमा उपस्थित भएर ब्रिफिङ गरेका छन्।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार ४ जनाकै लाइन सकेसम्म एकतामै बल गर्नुपर्ने यदि ओली नसच्चिए नयाँ बाटो (दल दर्ता वा पुनर्गठन)मा जानु पर्नेतर्फ छ। ‘एकतामै जोड गर्नेको पनि अन्तिममा केही लागेन भने नयाँ बाटो रोज्ने। तर, अलिक समय अझै मिहिनेत गरौं। अहिले नै पार्टी निर्माण गर्ने समय आधार निर्माण भएको छैन,’ उनीहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले फरकधारसँग भने, ‘यस्तो अवस्थमा कार्यकर्ताले पनि साथ दिने सम्भावना हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भने दक्षिणपन्थी शक्ति र गैरकम्युनिस्ट शक्ति बलिया हुन्छन्। राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, संघीयता कमजोर हुन्छ। त्यसैले अझै मिहिनेत गरौं, नआत्तिऔं, नहतारिऔँ।’
ओलीको छलछाममा नपरौँ, नयाँ पार्टी खोलौँ
पुस ५ मा पहिलो पटक संसद विघटन भएअघिबाटै ओलीविरुद्ध आवाज उठाइरहेका केही नेताहरुले बैठकमा भिन्न मत राखे। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रामकुमारी झाँक्री लगायतहरु एमालेका ‘हार्डलाइनर’मा पर्छन्। त्यसमा पनि उनीहरु भन्दा एक कदम अघि बढेर विजय पौडेल, राजेन्द्र राई, जगन्नाथ खतिवडा र प्रकाश ज्वालाले ओलीसँग आत्मसमर्पणको बाटो होइन, नयाँ पार्टी खोल्ने पक्षमा उभिनुपर्ने भन्दै लिखित पत्र नै दिएका छन्।
‘अहिले हामी भित्र ओलीले एकताको लागि वार्ता सुरु गरेको होइन। हामीलाई फुटाउन र अलमलाउनका लागि हो, ’ अर्को पक्षले फरक मतबारे बताउँदै ती नेताले भने,‘संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा कमजोर पार्न गरेको हो, त्यसकारण अलमलिनु हुँदैन, छिट्टै नयाँ पार्टी खोल्नेतिर जानुपर्छ भन्‍ने आयो।’
माधव नेपालले के भने ?
नेता नेपालले हिजो छलफलको सुरुमा धेरै बोलेनन्। ‘पार्टी संकटमा छ। यो बेलामा ओलीबाट एकताका लागि कुनै सकारात्मक सन्देश छैनन्। तपाईँहरुका कुरा सुनौं पहिला’, बिहीबार नेपालले भनेका थिए।
आज केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि नेपालले समग्र स्थितिको ब्रिफिङ गरे। बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताका अनुसार नेपालले अब धेरै लामो समय एकताका लागि ओलीलाई पर्खन नसकिनेमै जोड दिए। ‘अब ओलीले एकता गर्लान् र एकताकै लागि यो प्रयास गरेका हुन भन्ने लाग्दैन', नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने, 'उनमा अब धेरै पर्न पनि सकिँदैन।’
‘माधव कमरेड पहिलाको तर्कभन्दा बाहिर हुनुहुन्‍न, ओली सुध्रिँदैनन्, एकता गर्न तयार छैनन्। सानो पार्टी बन्छ कि यो पारा लाग्दैन भन्ने जस्ता कुराहरूबाट डराउनु हुँदैन,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘तर, अलिकति छिटो गर्नुपर्छ मान्छे लाखा-पाखा लाग्छन्। कार्यकर्ताहरु पनि अन्योलमा परे भन्ने कुरामा नेपालको विशेष जोड थियो।’
नेता नेपालले ओली पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुले विभिन्न मिडियाको अन्तर्वार्ता र ओलीकै नजिकका विश्वासपात्रले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको प्रतिक्रियाले एकताको पक्षमा ओली नभएको स्पष्ट भइसकेको बताएका थिए।
'केपी ओली पक्षका विभिन्न नेताहरु, विष्णु पौडेलले यसो भनेर बोलिरहेका छन्, प्रदीप ज्ञवालीले यसो भनिरहेका छन्, सूर्य थापाले यस्तो लेखिरहेको छ,’ नेपालले बोलेको स्मरण गर्दै आफ्नो भाषामा ढाल्दै ती नेताले भने, ‘राजन भट्टराईले यस्तो भनिरहेका छन् देखि ओलीनिकट मान्छेहरुले भनिरहेको बेलामा एकता हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिँदैन।’
पार्टी एकताका लागि वार्ताको ढोका सधैँ खुला राखिए पनि जारी वार्तालाई लामो समय लान नसकिने उनले बताएका थिए। ‘वार्ताको ढोका त सधैँ खुल्ला हुन्छ। तर, अहिलेको वार्ता चाहिँ लामो समय लान सकिँदैन', नेपालले बैठकमा भनेका थिए।
अब औपचारिक छलफल बन्द
एकपटक कारबाहीमा परेर फुकुवा भएका नेताहरु फेरि ओलीको कारबाहीमा परेका छन्। पार्टीको विवाद समाधान गर्न बनाएको कार्यदलका संयोजक समेत रहेका भीम रावललाई नै कारबाही गरिसकेका ओलीले पुनः एकताबारे नसोचेको अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले बताएका थिए।
‘केही केही कमरेडहरुले त भन्नुभयो, हाम्रो वार्ता टोलीको कमान्डरलाई नै कारबाही भयो। वार्ता त अहिले अनैतिक पनि हुन्छ भन्नुभयो,’ ती नेताले सुनाए।
उनले आजको बैठकपछि यसअघि भइरहेको वार्तालाई निरन्तरता नदिनेबारे छलफल भएको सुनाए। ‘व्यक्तिगत रुपमा कसैले गर्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरुको स्वतन्त्रताको कुरा हो', ती नेताले भने, 'तर, औपचारिक रुपमा कार्यदलको तर्फबाट र टिमको तर्फबाट औपचारिक वार्ता चाँही गर्न हुँदैन त्यो सकियो भन्ने कुरा उठ्यो।’
योगेश र गोकर्णको ब्रिफिङ
ओली पक्षका नेताहरुसँग संवादमा रहेका नेताद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले शुक्रबार बैठकमा बोले। दुवै नेताले केपी ओलीप्रति नेपाल समूहका अन्य केन्द्रीय सदस्यहरुको र आफूहरुको बुझाई एउटै भएको बताएका थिए।
‘चर्चा परिचर्चामा जे आए पनि, मन्त्री पदको लोभ जस्ता कुरा गरे पनि, मन्त्रिपरिषदमा बसेर ओलीसँग जुध्ने हामी नै हौं,’ बैठकमा विष्टका भनाइको सार उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘घनश्याम र योगेशजीले पनि राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गर्दागर्दै म हटेँ। मैले अडान राखेँ। इतिहासका विभिन्न प्रसंग झिकेर (कहिल्यै ओलीलाई साथ दिइएन, ओलीलाई जेल बस्दादेखि चिनेको हो भन्दै) केही लागेन भने अर्को पार्टी खोल्ने कुरामा मेरो अन्यथा कुरा छैन। तर, अहिले मिहिनेत गरौं, कोसिस गरौं भन्ने कुरा हो।’
विष्टले अगाडि भनेका थिए, ‘तपाईं हाम्रो ओलीप्रतिको बुझाइ एउटै हो। तपाईंहरुले जस्तो बुझ्नुहुन्छ हामीले पनि त्यस्तै बुझ्ने हो। तर, एकखाले साथीहरु पार्टी खोलौँ भनेर हतार गर्नुहुन्छ तर हामी अलिकति समय लिएर एकतामै जोड गरौं मात्र भनेर लागेका हौँ।’
त्यस्तै बैठकमा योगेशले पनि २०७५ जेठ २ मा पार्टी फर्काउन लागि परेको बताएका थिए। ‘केपी ओली पक्षसँग गरिएको वार्ता जेठ २ को अवस्थामा पार्टीलाई पुर्याउ हो', उनले भनेका थिए, 'यो हाम्रो सामूहिक संघर्षलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो। एकता आत्मसमर्पण होइन। एकता ओलीको स्वेच्छाचारिता स्वीकार्न पनि होइन, विधिबाट र प्रक्रियाबाट संगठन चलाउन, पार्टी चलाउन हो।’
समाचार आएपछि ‘हल्लीखल्ली’
आज पनि भर्चुअल बैठक चलिरहेको थियो। हिजो बोलेर बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरुले बोल्दै थिए। ओली पक्षसँग वार्ता गरिरहेका नेताद्वय भट्टराई र विष्टले बोलेपछि केही अनलाइन मिडियामा समाचार आउन थाले।
त्यसपछि सुनसानजस्तै बनेको मिडिया नेपाल बोल्न थाल्नेबित्तिकै जुरमुरायो। केही अनलाइनमा नेपाल, भट्टराई र विष्टले बैठकमा राखेका कुराहरु ‘रेकर्ड’ नै बाहिर आउन थाल्यो।
त्यसपछि बैठकमै यसबारे कुरा उठेको थियो। फरकधारसँगको अनौपचारिक कुरामा एक केन्द्री सदस्य भन्छन्, ‘बाहिर धेरै कुरा आयो भनेर रिसाउन थाले हो साथीहरु त!’
नेताहरु बोल्न सुरु गरेको केही मिनेटमै समाचार बाहिरिएपछि बैठकमा तुरुन्तै नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए। ‘बोल्दाबोल्दै, बोलेको ३/४ मिनेटमा बाहिर गयो रे कुरा। त्यहीकारण बैठकमै आपत्ति आइहाल्यो। यो कुरामा साथीहरु एकछिन वादविवादमा उत्रिए पनि', ती नेताले भने,‘बाहिर बैठकमा बोल्दाबोल्दै कसरी जान्छ? भनेर साथीहरुले आपत्ति जनाउनुभयो। करिब करिब यहाँका कुरा रेकर्ड गरेर सारे जस्तै लेखिएको भन्ने कुरा उठेको थियो।’
प्रकाशित मिति : जेठ २१, २०७८ शुक्रबार २३:८:१२,